Shaaha birta ah ee kabka lagu dhajiyay
Alumiunm Daawaha kariyaha
Waxyaabaha: Alumiunm Alloy Habka habeynta Midabbada: Madowga / qalinka / dahabka / casaanka cas / cawl bir / nikkelMeas: LxH: 135 * 105 * 212mm NW: 0.58kg GW: 0.82kg
Alumiunm Alloy marawaxada makiinada wax lagu kariyo Waxyaabaha: Alumiunm Alloy Habka u cusbooneysiinta Midabbada Midabka: Madow / qalin / dahab / casaan cas / bir cawl / nickelMaas: LxH: 157 * 108 * 223mm NW: 0.52 kg GW: 0.77kg garbaha anodized gaar ah oo aan miridhku ama daxalka on this marawaxadda kariyaha alwaax ayaa loogu talagalay in lagu gaarsiiyo qulqulka a heerkulka aad u ballaaran. marawaxadda kariyaha ayaa soo saaraysa koronto u gaar ah iyada oo loo marayo kala duwanaanshaha heerkulka. Xadhiga birta ee salka ku haysa marawaxadu waa Bimetall ...
Alumiunm Alloy taageerayaasha dabka
Waxyaabaha: Alumiunm Alloy Habka habeynta Midabbada Midabka: Madow / qalin / dahab / casaan cas / bir cawl / nikeelMaas: LxH: 135 * 103 * 197mm NW: 0.63 kg GW: 0.86kg ma ahan miridhku ama wasakh on this marawaxadda kariyaha alwaax loogu talagalay in lagu gaarsiiyo qulqulka a heerkulka aad u ballaaran. marawaxadda shooladda abuuraa koronto u gaar ah iyada oo loo marayo kala duwanaanshaha heerkulka. strip ee biraha ee salka of taageere waa strip Bimetallic loogu talagalay naf ...
Alumiunm Alloy marawaxadda mashiinka Mashiinka: Alumiunm Alloy Habka u cusboonaysiintaSalaamadaha Midabka: Madow / qalin / dahab / casaan casaan / cawl bir ah / nickelMeas: LxH: 135 * 103 * 197mm NW: 0.63 kg GW: 0.86kg Wax soo saarka marawaxadu ma fiicna. Waxay badanaa kuxirantahay matoorka kujira gudaha. Haddii mootadu ay fududahay in la waxyeeleeyo, kuma habboona in mar kale la iibsado ama la dayactiro, kharashkuna wuxuu u dhigmaa iibsiga mid kale. Matoorradeena dhammaantood waa * * * * fiilooyin naxaas ah, waana fiilooyin naxaas ah oo leh heerkul heer sare oo iska caabin ah. Ma aha naxaas caadi ah ...
Alumiunm Daawaha Mashiinka Daawada
Alumiunm Alloy Mashiinka Foornada Maaddada: Alumiunm Alloy Nidaamka cusub ee loo yaqaan 'Allium Alloy Alloy' Nidaamka cusub ee loo yaqaan 'Blades Color': Madow / qalin / dahab / casaan casaan / cawl bir ah / nikeel Mea: LxH: 140 * 110 * 250mm NW: 0.97 kg ma ahan miridhku ama wasakhda ku jirta marawaxadan kariyaha alwaaxa ayaa loogu talagalay inay gaarsiiso heer kul aad u ballaaran. marawaxadda shooladda waxay soo saartaa koronto u gaar ah iyada oo loo marayo kala duwanaanta heerkulka. birta ka samaysan saldhigga marawaxadda ayaa ah Bimetallic strip des .. .
Alumiunm Alloym Taageerayaasha Mashiinka Kariyaha
Alumiunm Alloy Alwaax Taageerayaasha Foornada Maaddada: Alumiunm Alloy Habka u cusbooneysiinta Midabbada Midabka: Madow / qalin / dahab / casaan casaan / cawl bir ah / nickelMeas: LxH: 140 * 110 * 250mm NW: 0.97 kg ma ahan miridhku ama wasakhda ku jirta marawaxadan kariyaha alwaaxa ayaa loogu talagalay inay gaarsiiso heer kul aad u ballaaran. marawaxadda shooladda waxay soo saartaa koronto u gaar ah iyada oo loo marayo kala duwanaanta heerkulka. birta ka samaysan saldhigga marawaxadda ayaa ah Bimetallic strip des .. .
123456 Xiga> >> Bogga 1/39